Ukuqhutywa kweethambo ngeeNtloko: Emva kweShokz Aeropex [Ukuphononongwa] | Iindaba zeGajethi
Ii-headphone ziyaqhubeka ukuba yinxalenye ebalulekileyo kubomi bethu bemihla ngemihla, enyanisweni kula maxesha kungenzeka ukuba bahlupheke kolunye uvukelo olubaluleke kakhulu kwicandelo labo: Iifowuni ze-TWS kunye neethowuni zokuhambisa zethambo. Ngeli xesha sikuphathela ii-headphone zokuhambisa amathambo, into ephakamisa ukuthandabuza okuninzi phakathi kwabathengi kodwa ibekwe njengenye yeendlela ezizezona zilungileyo kwabo baqhuba imidlalo rhoqo.
Fumanisa nathi ii-headphone zokuhambisa amathambo Emva kweShokz Aeropex, Sikubonisa ukuba zithini na iimpawu zayo, kwaye kunjalo neziphene zazo.
1 Okokuqala, zithini ii-headphone zokuhambisa ithambo?
2 Uyilo kunye nezixhobo: Yenzelwe ezemidlalo
3 Iimpawu zobugcisa kunye noqwalaselo
Okokuqala, zithini ii-headphone zokuhambisa ithambo?
Asizukuyiqala indlu ngophahla, uninzi lwenu luya kubona i-headphone zokuhambisa amathambo okokuqala, ke kufanelekile ukuba siqale ngokuchaza ukuba obu buchwephesha buqulathe ntoni. Ngokungafaniyo nezinye ii-headphone, ezi zeAfterShokz Aeropex azifakwanga endlebeni nangayiphi na indlela, zibekwe kanye phambi kwendlebe kwaye ithathe ithuba lobuchwephesha obahlukileyo kunesisithethi esincinci esincinci ukuhambisa umculo kuthi (okanye nantoni na esimameleyo ngelo xesha).
Ukwenza oku usebenzisa uthotho lweentshukumo ezihanjiswa ngamathambo ethu ziye kwindlebe yangaphakathi. Kakhulu kangangokuba ivumela ukuva kubantu abonakalise iindlebe kwaye kwangaxeshanye babone ingxolo yendalo esingqongileyo, oko ke kuqinisekisa ukhuseleko lweembaleki (kuba zithathela ingqalelo imeko-bume). Le ngcaciso ishwankathelwe ngokucacileyo, ukuze "ungaphambani kakhulu", kodwa oku kukunika umbono ocacileyo wokuba kutheni ii-headphone zokuhambisa amathambo ingezizo ii-headphone eziqhelekileyo njengayo nayiphi na enye, ngaphandle kwethekhnoloji yeBluetooth abayisebenzisayo.
Uyilo kunye nezixhobo: Yenzelwe ezemidlalo
Emva kweShock ithatha unonophelo olukhulu kuyilo kunye nakwizincedisi zemveliso. Sifumana ii-headphone ezinendawo yezemidlalo njengokulungiswa okucacileyo, yiyo loo nto kufuneka zenziwe ngezinto ezinganyangekiyo, ngaphandle kokuphulukana nobuhle bayo. Ukuqala sinayo Umdibaniso wemibala emine iyafumaneka: Mnyama, Ngwevu, Bomvu, noBlue. Kudala sivavanya ingxelo emnyama njengoko ubona kwiifoto. Sifumana iringi engqingqwa ngasemva, ngelixa sinezinto ezikhupha ngaphambili, inxenye ngaphandle kokusicinezela, iya kuhlala ixhaswe kakuhle phambi kweendlebe zethu ngenxa yemisesane yayo yerabha ephezulu. Banobunzima bebonke Iigram ezingama-26, ke zikhululekile kwaye ngaphakathi zenziwe titanium.
Imagnetic silicone yokuthwala ibhegi
2x iintambo zokutshaja Magnetic
Bajongeka benganyangeki, kwaye banesiqinisekiso se-IP67, Oku kuthetha ukuba awanamanzi ngokupheleleyo ukuze banganyamezeli ukubila kuphela, kodwa iimeko ezigqithileyo zokusingqongileyo, awuyi kuba nexhala konke konke xa bemanzi okanye hayi. Sineqhosha ngaphambili lokulawula umxholo, iphaneli encinci yamaqhosha kumda ongaphezulu wokulawula ivolumu kunye ne-ON / OFF kunye nezibuko elinemagnethi ecaleni kwala maqhosha athi ngokusebenzisa iintambo ezimbini ze-USB ezifakwe kwiphakheji esinokuthi vumela ukulayishwa okulula.
Iimpawu zobugcisa kunye noqwalaselo
Siqala ngeyona datha yobuchwephesha, okokuqala emva kweShokz isebenzise itekhnoloji yayo yelungelo elilodwa lomenzi I-PremiumPitch + eyandisa isandi ukuphucula amava, ngokunyanisekileyo ndifumene umgangatho ophezulu wesandi, ke utyalomali lubonakala luphawuleka. Itekhnoloji ye-AfterShokz enobunikazi isebenza ngokubambisana ne-seismtea UkuvuzaSlayer ethintela ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 zokulahleka kwesandi esiqhelekileyo kwii-headphone zolu hlobo. Nangona kunjalo, siqala ngedatha eqhelekileyo ye ziqhelekile ebantwiniUmzekelo, sinetekhnoloji ye-Bluetooth 5.0 ebaluleke kakhulu malunga nokuzimela kunye nomgangatho weaudio.
Ngokumalunga nokumelana, siyakwazi ukuwangenisa ukuya kuthi ga kwimitha enzulu kangangesiqingatha seyure, into esingakhange sikuqinisekise ngezizathu ezicacileyo. Ewe sibamanzisile ngamanzi emvula kwaye asifumananga siphazamiso, basebenza ngokugqibeleleyo. Sifanele ukuthi imveliso ibonakala ijikeleze ngokubhekiselele ekusebenzeni kwaye inika ngokuthe ngqo oko ikuthembisayo, zilungelelanisa ngokukhawuleza kwaye isixhobo sethu esiphathwayo sigcinwa ukuze sinxibelelane ngokukhawuleza nangokuzenzekelayo nje ukuba sizilayite kwakhona.
Kufuneka sitsho umgangatho namandla omculo avakala ngcono kakhulu kunokuba besilindele. Nangona kuyinyani ukuba eminye imixholo ekhutshwa ngaphandle kwee-headphone ibonakala ngathi iviwe kwaye ukuba sidlula kwi-90% yevolumu ephezulu sifumana ukurhawuzelela okuncinci ezindlebeni, into ebonakala ngathi ichaphazela abanye abasebenzisi, kuba kuvavanywe nabanye oogxa kwaye khange babange ukuba bayasibona esi sandi, sicinga ukuba kuxhomekeke kubuntununtunu bodwa bokuva.
Ngokumalunga nokuzimela, sifumana iiyure ezisibhozo zokudlala umculo, ethi kuvavanyo lwethu bekujikeleze iiyure ezisi-7 zokudlala komculo okungaphazanyiswanga. Kufuneka iqatshelwe ukuba sine Imakrofoni ephindwe kabini Ngokurhoxiswa kwengxolo yangaphandle, oko kukuthi, siya kuba nakho ukuphendula iifowuni zethu ngaphandle kwengxaki, oku kuyabulelwa kakhulu kwaye iifowuni zibonise umgangatho olungileyo kuthi nakwinqanaba lokwamkela, nokuba zithini na iimeko zokufowuna.
Iifowuni zokuqhutywa kweethambo ziye zaphikisana nexabiso labo lemali, nangona kunjalo ezi I-Aeropex ngu-AfterShokz Banikezele ngomgangatho wokumamela kunye nokungafaniyo okusothusileyo. Siyakukhumbuza ukuba ungazithenga kwii-euro ezili-169 kwiphepha labo iwebhusayithi esemthethweni y kwiAmazon. Kubonakala ngathi sijamelene neyona ntloko yentloko yokuhambisa amathambo kwintengiso.
Como amagqabantshintshi Ndingathanda ukuqaqambisa ubutofotofo bokukhanya kwayo kunye netshaja yayo enemagnethi, ethi ngaphandle kokuba ngumniniyo iqinisekisa ukuhlala ixesha elide kunye nokulula kunzima ukufezekiswa ngabanye abanamazibuko okutshaja ngokwesiqhelo.
Izinto ezikumgangatho ophezulu kunye noyilo olukhulu kakhulu
Umthamo ophezulu kunye nomgangatho omangalisayo wokumamela kwimveliso enjalo
Lula ngentambo yokutshaja, izixhobo kunye nengxowa
Njengamanqaku kancinci kancinci, Ukuthi iiyure ze-7 zokuzimela zinokubonakala zimbalwa kum, ngaphandle kokuhlawuliswa ngokulula, kunye nemvakalelo yokutswina kwimithamo ephezulu ebangele ukuba ndibekho.
Ndikhumbula ukuzimela okungakumbi
Yenza ukukhathaza kumanani aphezulu kakhulu
Emva kweShokz Aeropex Bone Conduction Headphones
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ukuqhutywa kweethambo ngehedfoni: EmvaShokz Aeropex [Hlaziya]
E-Apple ayizizo iziqhulo ezineekopi zePod Classic yakho